अन्ततः भाइरल बाजे एक्लै रुदै आए मिडियामा,कहाँ गइन त पुजा? गरे तीन करोड नेपालीको मन रुवाउने कुरा (भिडियो सहित) - Complete Nepali News Portal
अन्ततः भाइरल बाजे एक्लै रुदै आए मिडियामा,कहाँ गइन त पुजा? गरे तीन करोड नेपालीको मन रुवाउने कुरा (भिडियो सहित)
एकाएक भाइरल भएका वृद्ध एक्लै रुदै मिडियामा आएका छन । पछिल्लो समय एकाएक मिडियामा भाइरल बनेको जोडिको अहिले जताततै चर्चा छ । बाहिर झट्ट हेर्दा रमाइलो लाग्ने जोडिको वास्तविक भित्री कहानी सबैको मन रुवाउने खालको छ । एकाएक चर्चामा आएको जोडि अहिले सामाजिक संजालहरुमा जताततै देखिन्छ । भाइरल हुनु र चर्चा कमाउनु त एकतर्फी छदैछ तर उनिहरुको भित्री बेदना सायद थोरैले मात्र बुझेको देखिन्छ ।
चारवटी श्रीमती बिहे गरेर पनि घरबार नचलेपछी अहिले आफुभन्दा ४७ बर्ष कान्छी श्रीमती ल्याएका वृद्धले आफुले बिगतमा पाएका दुख सम्झिदै अहिले आफ्नो छोरो अस्पतालमा जीवन र मृत्युको दोसाधमा रहेको बताउदै आँसु नै खसाले । एकातिर गरिबी घरमा पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ हुदैन सबै चुहिने टिनको छानो । अर्कोतिर आफुले ल्याएकी सानी श्रीमतीको एउटा हात नै नभएको र आफुले केही गर्न नसकेको बताउदै निकै दुखका कुरा गरे ।
गाउमा कहिलेकाही धामि बसेर कमाएको दुई चार सयले साना नाति नातिनातिनालाई स्याहार गर्न र घरब्यबहार चलाउन नसकेको बताए । आफुले बुढेसकालमा पनि धेरै दुख पाएको र आफुले कसैलाई सुखमा राख्न नसकेको बताउदै भाइरल वृद्ध बाजेले आखाभरी आँसु बनाएर बोल्नै सकेनन । उनले आफुले पाएका दुख पिडाका बारेमा भिडियोमा यस्तोसम्म सुनाए कि हेर्दा तपाईंको आखाबाट आँसु आउने छ । तलको भिडियोमा हेर्नुहोला तीन करोड नेपालिको मन रुनेछ ।
नेपाली भुमिमा भारतले सडक निर्माण गरिरहँदा कलाकारहरुको खबरदारी “हाम्रो माटो”...